Abuu Muscab oo ka hadlay weerarkii ay ciidankooda ku qaadeen xerada Laanta Buuro – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Abuu Muscab oo ka hadlay weerarkii ay ciidankooda ku qaadeen xerada Laanta Buuro
Afhayeenka ciidanka Xarakada Al-shabaab C/casiis Abuu Muscab ayaa faah faahin ka bixiyay weerarkii ay hal habeen ka hor ku galeen xerada Laanta Buuro, oo qiyaastii 10km u jirta degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose.
Xerada Laanta Buuro ayaa waxaa degan ciidanka militariga dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana dhawaan la dejiyay taliska qeybta 12-ka April ee ciidanka xoogga dalka, ka dib markii lagu amray in ay ka guuraan xarunta xisbiga ee magaalada Muqdisho.
Afhayeenka Al-shabaab Abuu Muscab ayaa sheegay in weerarkan ay dagaal-yahanadooda la beegsadeen xerada Laanta Buuro xilli dambe oo habeen ah, isla-markaana uu ku bilowday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa, oo sida uu sheegay lagu furay albaabka xeradaan, waxaana xigay ciidan dhulka ah oo ku dhaqaaqay xeradaasi.
Abuu Muscab ayaa ku faanay in dagaal muddo kooban socday ka dib ay u suurtagashay in ay la wareegan gacan ku haynta xerada, markii ay ka carareen sida uu sheegay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya.
Sidoo kale weerarkan, ayuu sheegay inuu barbar socday weerar kaloo madaafiic loo adeegsaday, oo mintidiintu la beegsatay xerada Alla Yaasir ee deegaanka Nambar Konton, taasoo ay degan yihiin ciidanka nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM, sidoo kalana ay iska horimaad toos ihi la galeen, isagoona sidoo kale tilmaamay in taasi ay keentay inay isu gurman waayaan, sida uu yiri.
Dhinaca kale, mar uu ka hadlaayay khasaaraha ay weerarka xerada Laanta Buuro ugu geysteen ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya, ayuu sheegay inay kaga dileen 30 askari, iyadoo toddobo gaarina ay kaga qabsadeen, halka saddex kalana ay uga gubeen, sida uu yiri.
C/casiis Abuu Muscab oo la hadlay warbaahinta afka Shabaabka ku hadasha, ayaa intaas ka dib sheegay in mintidiintu dib uga soo baxday xerada Laanta Buuro, ka dib amar kaga yimid taliskooda.
Xeradan ayuu sheegay in saddex bilood muddo laga jooggo ay weerar kale ku qabsadeen.
Ugu dambeyntii, C/casiis Abuu Muscab, ayaan sheegin khasaaraha Al-shabaab kasoo gaaray weerarkaasi, marka laga soo taggo nin naftii haliga ahaa oo gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ku dhuftay albaabka hore ee xerada Laanta Buuro.